Xa unomdla ekusebenziseni esikolweni sezokwelapha, kodwa kwenzeka ukuba ufune indawo yokuhlala ethile, kunokubonakala ngathi awunayo inzuzo xa kuziwa ekuthathe i- MCAT . Awukwazi ukungachanekanga. Njengamanye amanyathelo asemgangathweni - i- SAT, i- LSAT , i- GRE- yokuhlala iyafumaneka kwi-MCAT, nayo. Into efunekayo ukuba uyenze xa ukholelwa ukuba ungumntu ofuna ukuhlala kwe-MCAT, ubonisa amanyathelo okufuneka uyithathe ukuze ukhusele olo hlobo lokubhalisa.
Yilapho eli nqaku lifumaneka khona.
Jonga ngezantsi ngolwazi malunga neentlobo zeendawo zokuhlala ze-MCAT ezikhoyo kunye nezinto omele uzenze ukuze uzikhusele.
Iimviwo ze-MCAT zokuBhalisa
Ngubani ofuna i-MCAT yokuhlala?
Abahloli abanesifo sezempilo okanye ukukhubazeka okubangela ukuba utshintsho kwiimeko ze-MCAT (okanye ucinge ukuba unalo) kufuneka uqhubeke kwaye ufake isicelo se-MCAT yokuhlala. I-AAMC iluhlu lolu hlobo lulandelayo njengommeli weemeko okanye ukukhubazeka ezingakufanelekela ukuba utshintshe utshintsho. Bakubona ke, ukuba uluhlu alubandakanyi, ngoko ke ukuba ukholelwa ukuba udinga utshintsho lwe-MCAT, kufuneka usebenzise nokuba ngaba ukhubaze okanye imeko yakho ingaboniswa ngezantsi:
Ukukhathazeka-ukungaphumeleli kwengxaki yokuxhatshazwa komzimba (ADHD)
MCAT Indawo yokuhlala
Ngokuxhomekeke kwisidingo somntu ocela indawo yokuhlala, i-AAMC iya kunika izinto zokunceda ukuba i-MCAT ifumaneke ngakumbi. Uluhlu olulandelayo luyodwa isampula yento abanokuyenza ngayo:
Ixesha lokuvavanya elongezelelweyo
Igumbi lokuhlola elincinane
Imvume yokuzisa izinto ezithile njenge-inhaler, amanzi okanye i-candy enzima kwigumbi lokuvavanya
Ukuba ufuna iimeko zokuvavanya ngaphandle kwelinye leendawo zokuhlala ii-AAMC zikulungele ukwenza, kuya kufuneka wenze okucacileyo kwisicelo sakho ukuze bahlaziye iimfuno zakho baze bazimisele.
I-MCAT yokuhlala kwiProgram yesicelo
Ukuze ufumane ibhola yokugqeba ekukhuseleni i-MCAT yokuhlala, kuya kufuneka uzalise amanyathelo alandelayo.
Bhalisa kwi-ID ye-AAMC . Uya kusebenzisa le Ncwadana xa ubhalisa kwi-MCAT, isicelo sokuhlala, usebenzise kwisikolo sezonyango, isicelo sokuhlala kunye nokunye. Ngoko, qinisekisa ukuba i-ID yakho yomsebenzisi kunye nephasiwedi yinto oya kuyikhumbula kwaye ayiyi kubuya iphinda ibone kwakhona.
Bhalisa kwi-MCAT . Uya kufuneka urejistise kwisihlalo sokuhlola se-MCAT ekuqaleni, ngoko unokuthatha uvavanyo ngosuku kunye nexesha okhethayo xa isicelo sakho sendawo siphila. Ngemihla yemihla yokuhlola kunye namaxesha okukhetha kuyo, uya kuqiniseka ukuba ufumene enye ifanelekile.
Hlaziya i-Time Request Request Time amafayile kunye neentlobo . Kukho amaxesha ahlukeneyo kufuneka ungenise isicelo sakho ngokusekelwe kwinto ozama ukuyifumana. Uninzi lufuna iintsuku ezingama-60, ngokunjalo wenze uphando lwakho!
Funda iimfuno zeZicelo zoNcedo lwakho loKukhubazeka. Kukho iinkqubo ezahlukeneyo zokuhamba ngokubhekiselele ekubeni unesifo esisigxina (isifo sikashukela, i-asthma), ukulimala (umlenze ophukileyo) okanye ukukhubazeka kokufunda. Zonke izicelo kufuneka zibandakanye ileta yesikhokhelo esikhethekileyo esichaza ukukhubazeka kwakho kunye nokukhubazeka okusebenzayo kunye namaxwebhu ogqirha kunye novavanyo olunikezwa yi-AAMC.
Hambisa isicelo sakho. Kufuneka - KUNYE - ngenise isicelo sakho sokuhlala ngaphandle kweentsuku ezingama-60 ngaphambi kokuba ixesha lokugqibela lokubhaliswa kweSiliva. Yiyiphi iSiza sokuBhaliswa kweSiliva?
Lindela isigqibo! Uya kufumana ileta nge-MCAT yokuhlala kwi-Intanethi ukuba isicelo sakho siye savunywa okanye samkelwa. Ukuba uvunyiwe, isinyathelo sakho esilandelayo siya kuba ukuqinisekisa isihlalo sakho njengomhloli weendawo. Ukuba unqatshelwe, vele ubonise ixesha lakho lokuhlola eliqhelekileyo.
Imibuzo ye-MCAT yokuhlala
Ufumene umbuzo we-AAMC? Unokuqhagamshelana nabo nge-imeyili okanye ngeposi.
I-MCAT Ofisi yoVavanyo lokuHlola
I-Attn: uSaresa Davis, uMgcini we-Mailroom Supervisor
Amageyimu okuphucula amaKhuphiswano